UMalema uzophikisa esokushaqelwa impahla | isiZulu
UMalema uzophikisa esokushaqelwa impahla
I-SARS ingase ishaqe impahla kaMalema
Owayengumngani kaMalema kwelenkohlakalo
Johannesburg - Lowo owayengumholi we-ANC Youth League owaxoshwa uJulius Malema uzophikisa isiphakamiso seSA Revenue Services (Sars) sokuthi ahlonzwe njengongenamali bese eshaqelwa impahla, kusho ummeli wakhe ngoLwesihlanu.
"Ngingaqinisekisa ukuthi siyalelwe ukuba siphikisane nesicelo," kusho uNicqui Galaktiou.
Ngokwamaphepha afakwe eNkantolo eNkulu yasePitoli kuleli sonto, uMalema ukweleta abakwaSars u-R16 million kanti "ucwile ezikweletini njengoba engeke akwazi ukuyikhokha le mali."
Kulesi sicelo abaqoqi bentela bafuna ukunikezwa igunya lokushaqa impahla kaMalema -- okubalwa umuzi wakhe oseSandton, nomunye ongadalulwanga kanjalo nepulazi lakhe eliseLimpopo -- ukuze ziyodayiswa esidlangalaleni.
Icala lizolalelwa ngoFebhuwari 27.